Shina No Bark Collar mpamatsy sy mpanamboatra - Shenzhen TIZE Technology Co., ltd.
Home > Products > Tsy misy bark Collar
Mpanamboatra TIZE Dog No Bark Collar hatramin'ny taona 2011, namokatra modely amidy mafana maro,
tonga lafatra hanampiana ny tompona biby fiofanana tsara ny biby fiompiny.
Tafiditra ao ny vesatra famatsiana bateria, dikan-takarina azo jerena, fitarihana maoderina.
O serivisy OEM & ODM dia misy.
Patent Tsy Mampahory Hitsikitsiketsika Loza Mijanona
Patent No Hact Static Shock Dog Bark Stop dia mampiasa Chip manan-tsaina, mampiofana tsara ny alika mba hampitsaharana ny fanelingelenana ataony amin'ny feo fampitandremana sy fandrahonana. Tsy misy ny Static Shock sy ny maha-olona ary azo antoka kokoa ho an'ny biby. O serivisy OEM & ODM dia misy.
2 loko mamorona patanty kely Mini kely alika mikiky ny vazaha
Ny loko miloko Patent kely famoronana Mini kely alika amin'ny fanamafisana Anti Bark Collar dia mampiasa Chip manan-tsaina, ary mampiofana tsara ny alika mba hampitsaharana ny fanakorontana miaraka aminy amin'ny feo fampitandremana sy fandrahonana. Tsy misy ny Static Shock sy ny maha-olona ary azo antoka kokoa. Tonga lafatra ampiasaina ho an'ny serivisy alika kely sy alikaOEM & ODM dia misy.
Mampitandrina ny volom-borona miforitra amin'ny alikaola
Mampitandrina ny oram-borona ny alika mifehy ny vorona ny alika mifehy azy io. Tsy misy ny Static Shock sy ny maha-olona ary azo antoka kokoa ho an'ny biby. O serivisy OEM & ODM dia misy.
Ny bateria famolavolana famoronana tokana natokana ho an'ny fanofanana Dog Dog Bark Collar
Ny bateria fanamboarana miavaka Camouflage natokana ho an'ny fanofanana Dog No Bark Collar dia mampiasa Chip manan-tsaina, mahomby ny alika hampiato ny fanakorontana miaraka amina feo fampitandremana sy fandrahonana. Tsy misy ny Static Shock sy ny maha-olona ary azo antoka kokoa ho an'ny biby. O serivisy OEM & ODM dia misy.
Zavakanto mahazatra tsy misy fijanonana tsy mampitsikombaka amin'ny alikaola
Ny famolavolana klasik tsy misy fijanonana tsy mampitsahatra ny Black Barking Collar dia mampiasa Chip manan-tsaina, ary mampiofana tsara ny alika mba hampijanonana ny fahakorontanan'izy ireo miaraka amin'ny feo fampitandremana sy fandrahonana. Tsy misy ny Static Shock sy ny maha-olona ary azo antoka kokoa ho an'ny biby. O serivisy OEM & ODM dia misy.
Fehikibo jiro LED 4 amin'ny 1 Function Rechargeable Pet Barking Control Collar
Fitaovana fantsom-pahazavana LED 4 amin'ny 1 Function Rechargeable Pet Barking Control Collar dia fitaovana fisotroana tsara tarehy miaraka amin'ny fehikibo misy tselatra LED ary ny fampisehoana LED dia manamora ny alehanao amin'ny alika amin'ny alina, ary ny vokatra dia azo asiana recharged sy waterproof ihany koa.
Shenzhen TIZE Technology Co, ltd dia mpamatsy china mpamatsy an'ny R&D, fanamboarana sy serivisy ho an'ny mpanjifa ho an'ny Tsy misy bark Collar .Roa vola amin'ny fivarotam-bokatra ataonay sy manamboatra ny fonja vaovao indrindra, fancy Tsy misy bark Collar, ​​hanome anao lafo vidy izahay.